လမ်းထိပ်က ဗျူးတီးစလွန် – Grab Love Story
မိုးကောင်းတာကတစ်ကြောင်း အလုပ်ပါးနေတာလည်းပါတာမို့ နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ ခွင့်ယူပြီး အိမ်ပြန်လာတယ်။ တစ်လမ်းလုံး အုံ့မှိုင်းနေတဲ့ မိုးက အိမ်လမ်းထဲ ဝင်မှ သည်းလာတာမို့ အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ပဲ ဝင်ခဲ့လိုက်ရတယ်။ အထဲရောက်မှ ရေစို အဝတ်တွေ ပုဆိုးတွေချွတ်လို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တစ်ယောက်တည်း သပတ်တစ်ထည်ပတ်ထားရင်း ဆေးလိပ်ဖွာကာ အပြင်က သည်းနေတဲ့ မိုးကို ငေးကြည့်နေမိတော့တယ်။
အော် ရန်ကုန်မိုးနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးက နယ်ကနေ ဝမ်းရေးအတွက် အပန်းလေး ရောက်နေသူတွေအဖို့တော့ မျက်နှာသာ အတော်မပေးတဲ့အရာဗျ။ သီဟက နွားထိုးကြီးမြို့သား။ အသိတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံမှာ အလုပ်ဝင်နေတာ။ ရတဲ့လစာနဲ့ ကုန်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ် မမျှတာမို့ ဈေးသက်သာတဲ့ အိမ်ငှါးတန်းလျားမှာ ဘဝတူတွေ ၄ယောက်သား ပေါင်းလို့ နေရတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကို ပြန်တွေးရင်း ဆေးလိပ်ငွေ့တွေ “ဖူး” ကနဲ အဝေးကို မှုတ်ထုတ်လိုက်မိတယ်။
လေထဲမှာ လွင့်ပြေသွားတဲ့ ဖြူလွှလွှ အငွေ့တွေကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာကြည့်နေတုန်း ဒိန်းကနဲ ချုန်းလိုက်တဲ့ မိုးနဲ့အတူ မီးကလည်း ပျက်သွားပြန်ပါရော… အိမ်ယာပေါ် ကျောခင်းလို့ စခရင်ကွဲနေတဲ့ ဖုန်းအစုတ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ပွတ်နေမိတော့တယ်။ အပြင်မှာတော့ မိုးက အညှိူးနဲ့ ရွာလို့ကောင်းတုန်း… “ဖက်..ဖက်..ဘက်..ဖက်… ဖုတ်.ဖက်.ဘက်..ဘွတ်..ပြွတ်.ပလွတ်..ဖောင်း..ဖြောင်း..” “အွင်း..အင်း…အင်း..အဟင်း…အွင်း..အင်း…” သုံးထပ်သားပြားသာ ကာထားတဲ့ တစ်ဖက် အခန်းကလင်မယားရဲ့ လိုးသံဗျင်းသံ သဲ့သဲ့က မိုးသံနဲ့အတူ စီးဝင်လာတာ။
အိမ်ငှါး တန်းလျားဆိုပေသည့် ကျုးတဲသာသာ အခန်းတွဲတွေမို့ တစ်ဖက်အခန်းတွေဆီက ကြည်ချိန်ဆို လိုးသံတို့ ခပ်ညံညံကြားရတက်သလို မကြည်ချိန်များဆို ဝုန်းဒိုင်းအုန်းဂွမ်းနဲ့ ရိုက်သံ ပုတ်သံ ဆဲသံ ဆိုသံတို့နဲ့ ရန်ပွဲ သံတွေကိုလည်း ကြားရတက်စမြဲမို့ လိုးသံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆဲသံပဲဖြစ်ဖြစ် သီဟတို့ အတွက်က မဆန်းတော့ဘူး.. ခုလည်းပဲ တစ်ဖက်အခန်းက ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား ချစ်မောင်နဲ့ ဖင်ကြီးကြီး သူ့မိန်းမ မနွယ်တို့ မိုးအေးအေးနဲ့ နှပ်နေကြတဲ့ အသံတို့က ကပ်လျက်အခန်းမှာ အေးဆေး နားနေတဲ့ သီဟနားထဲ မခေါ်ပဲ ရောက်လာနေတော့တာ။
ချစ်မောင်က လက်ကြောတင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီလိုက်တယ်သာ ပြောတာ၊ တကယ့် တကယ်က ဖာခေါင်းသာသာရဲ့၊ သူ့မိန်းမ မနွယ်ဆိုတာလည်း သူနဲ့ မရခင်က ဖာခံစားတာ။ ရပြီးနောက်ပိုင်းလည်း ပိုက်ဆံမရှိရင် မရှိသလို ခံနေတုန်းပါပဲ။ ပိုထူးဆန်းတာက ချစ်မောင်က သူ့ဆိုင်ကယ် လာငှါးတဲ့ တစ်ချို့လူတွေ ဖာချချင်တယ်ပြောရင် တစ်ခြားမခေါ်သွားပဲ သူ့မိန်းမဆီ ခေါ်လာ ချခိုင်းတက်ပြန်သေး။ အေးပေါ့လေ.. ဝမ်းရေးအတွက်ဆိုတော့လည်း မိန်းမသော ဘာသော ဘယ်မြင်နိုင်ပါတော့မလဲ။ သူတို့ လင်မယား ရန်ဖြစ်ရင် စောက်ရမ်း ရီရတယ်။ ချစ်မောင်က မနွယ်ကို ဖာသယ်မလို့ ဆဲရင် မနွယ်က ဖာခေါင်းလို့ ပြန်ဆဲတက်ရော။ ဟီး.. နောက်တော့ ဆဲရင်းနဲ့ပဲ သူတို့အဖြစ်က ဟုတ်နေတော့ ချက်ချင်းကြီးကို ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် ထခွီးကြပြန်တာ။ ဘေးအခန်းက သီဟတို့ကတော့ ပြုံးဖြီးဖြီးပေါ့ဗျာ။
“ဖုန်း..ဘုန်း..” “ဟား..ကိုချစ်.. မိုးအေးအေးနဲ့ ပွဲကြမ်းနေတာလားဗျ.. အားကျသကွ..” သီဟက အခန်းနံရံကို ထုလို့ လှမ်းနောက်လိုက်တော့.. “ဟာ..သီဟလား.. အေးကွ.. ပွဲကြမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟ.. မင်းမနွယ်က တောင်းတနေလို့ ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာ ဟား…” လိုးရင်းတန်းလန်းနဲ့ ချစ်မောင် ပြန်ဖြေတာ။ မနွယ်ကတော့ ပေါင်ကြီးဖြဲလို့ အိုးအီးနဲ့ ခံလို့ပါပဲ။ သီဟက အမှန်ဆို အဲ့လို ကိစ္စတွေဆို အရင်က တစ်အားရှက်ပဲ။ အခုတော့လည်း တံငါနားနီးတံငါးကိုး… လိုးတဲ့သူလည်း မရှက်သလို ချောင်းတဲသူလည်း မရှက်အားတော့.. လိုက်ပ် လွှင့်သလို လိုးနေကြတဲ့ ချစ်မောင်တို့ လင်ခန်းမယားခန်းကို ပုံမှန်လိုတောင် ချောင်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ မနွယ်က အောက်ကနေ သူ့ယောက်ျား ခါးကို ခြေခွင်ချိတ်လို့ အော်အော်ပြီးခံ၊ ချစ်မောင်က စောင့်စောင့်ပြီးကျုံး ဟုတ်နေရောပဲ။ ချစ်မောင် လီးက တုတ်တုတ်တိုတိုနဲ့။ မနွယ်စောက်ဖုတ်က မဲမဲပြဲပြဲကြီး.. ဘယ်နှဲ့လုပ် မျှမလဲနော်။ ဒါမယ့်လည်း ချစ်မောင်က သူလိုးရင် အော်ညဉ်းနေမှ ကြိုက်တာမို့ မနွယ်က “အား နာတယ်..အိုး..အား..” နဲ့ အံ့ကြိတ်သံကြီးနဲ့ အော်ညဉ်းပေးရပါတယ်။
အဲ့လို အခါမျိုးတွေဆို သီဟစိတ်ထဲ “သူ့ယောက်ျား ပဲမြစ်လောက် လီးလေးကို အော်နေလိုက်တာများ ဓားနဲ့အထိုးခံနေရတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ငါ့ ၇ လက်မကျော် လီးနဲ့သာ အလိုးခံလိုက်ရရင် အသက်တောင် ထွက်သွားမလားပဲ” လို့ တွေးဖူးတယ်။ တကယ်လည်း ဟုတ်တယ် နွားထိုးကြီးသား သီဟရဲ့လီးက အတုတ်အရှည် စံချိန်မီလီးမျိုး။ သီဟပုံစံက အသားညိုညို ကိုယ်ထည်ပြားပြားနဲ့။ အကြမ်းဗတမ်းသမားပီပီ ဘော်ဒီတောင့်တောင့်.. ပြောနေကြတဲ့ အညိုဆင်အတောင့်ဆိုတဲ့ အစားမျိုး။ ရုပ်ကတော့ အညာသားရုပ်ပေမယ့် အဆိုးထဲလည်း မပါသလို အချောထဲလည်းမပါ။ ရွက်ကြမ်းရည်ကျိုပဲ။ ဒါပေသိ အဲ့ကောင်က စန်းတော့ အပွင့်သားဗျ။ ရွာမှာဆို ရည်စားကို နှစ်ယောက်ပြိုင် သုံးပွင့်ဆိုင် အဲ့လိုတွေထားတာ။ ကောင်မလေးတွေကလည်း သူ့အပေါ်ဆို ကျသဗျ။ ရွာကာလသားတွေထဲမှာတော့ သီဟက နှင်းဆီခိုင်ကြီးပေါ့ဗျာ။
ရန်ကုန်တက်ဖို့လုပ်တုန်းက လမ်းစရိတ်ကိုလည်း သူ့ကောင်မလေးတွေက ဝိုင်းပေးလိုက်ကြတယ်ဆိုပဲ။ အဲ့လို စော်ကြည်တာ။ အခု ရန်ကုန်ရောက်တော့မှ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ခြေငြိမ်နေရတာ။ ဒါတောင် ပွဲရုံက စာရေးမလေးတွေက သီဟအပေါ်ဆို ကြည်နေတက်ပြန်သေးတာ။ အာ့ကြောင့်ပြောပါတယ် စန်းအပြည့်နဲ့ပါလို့။ “အီး.အား..အွင်း..အ..အား..နာတယ်..နာတယ်…” “ဖောင်း..ဖြောင်း..” “အမေ့..အား…” နာတယ်ပြောလေ ဆက်ကနဲ ဆက်နဲ စောင့်ချလေနဲ့ တုံးလုံးကြီးတွေ အိပ်ယာထဲမှာ လိုးနေကြတာကို သီဟလည်း ချောင်းကြည့်ရင်း ခါးမှာ ပတ်ထားတဲ့ သပတ်ကို ဆွဲဖယ်လိုက်ပါတယ်။ လမွှေးအုံ ထူထူမဲမဲတို့ တောထနေအောင် ပေါက်ရောက်နေတဲ့ ဆီးခုံအောက်က အရှည်အတုတ် စံချိန်မီ သွေးကြောအပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ လီးကြီး ငေါက်ကနဲ ထောင်ထနေလိုက်ပုံများ မာန်တွေတောင် ဖီနေသယောင်ပဲ။
“ဖွီ.. ထွီ..” လက်ဝါးပြင်ထဲ တံတွေး ထွေးထည့်လို့ သူ့လီးကို ပါကင်လိုးသလိုမျိုး ဖီးလ်ရအောင် ခပ်ကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ကာ ဂွင်းထုနေမိပါတော့တယ်။ တစ်ဖက်အခန်းက ချစ်မောင်နဲ့မနွယ်တို့က လှေကြီးထိုးနဲ့ အသေလိုးနေကြသလို ဒီဖက်အခန်းက သီဟကလည်း လက်ဝါးနဲ့ လီး အချစ်ကြီးလို့ ဖက်ဖက်မြည်အောင် ဂွင်းတိုက်နေပါတော့တယ်။ အပြင်မှာတော့ မိုးကကောင်းဆဲ…. ဥပုသ်နေ့မို့ အခန်းမှာ တစ်ခြား အခန်းဖော်တွေလည်း ဆုံနေလို့ ဂရမ်းတောင့် ထောင်လို့ ဝိုင်းကောင်းနေတာ။ လေးယောက်လုံးက မိန်းမနဲ့ ဝေးနေကြတဲ့ကောင်တွေချည်ဆိုတော့ ဝိုင်းထဲ ပြောတဲ့စကားက စော်အကြောင်းပဲ။ သူတို့ စော်ထားတုန်းက ဘယ်စော်ကို ဘယ်လိုဖြိုတာတို့ ရှေ့ပေါက်တင်မကဘူး နောက်ပေါက်ပါဖွင့်တာတို့ ဆုံနေရောပဲ။ “အေးဟ.. နောက်ပေါက်ဖွင့်တယ်ဆိုလို့ သတိရတယ်၊ ငါ ဟိုတစ်နေ့က လမ်းထိပ်က ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ အောက်မွှေးသွားရိတ်တော့ အဲ့ဆိုင်က မာမီကြီးက သီဟအကြောင်းတွေ မေးနေတယ်..”
“ဟ.. ဟေ.. စောက်ဆန်းကြီးပါလား၊ ဘယ်လိုပြောပြီး ရိတ်ခိုင်းရလဲ” မျိုးကြီးစကားကို စိုးနိုင်က ကြားဖြတ်မေးလိုက်တာ “တောရှင်းချင်လို့ လို့သာပြောလိုက် အနောက်ခန်းထဲ ခေါ်ပြီး ရိတ်ပေးတယ်၊ ပြီးရင် ဂွင်းပါထုပေးတယ်..” “နေပါဦးဟ၊ အဲ့အခြောက်မကြီးက ငါ့ ဘာကိစ္စနဲ့ မေးရတာလဲ.. သူ့ဆိုင်လဲ တစ်ခါမှ မသွားဖူးပါဘူးကွာ. ဟုတ်ရော ဟုတ်လို့လား” “ဟုတ်တယ်.. ညာလက်မှာ တက်တူးနဲ့တစ်ယောက်တဲ့.. တို့လေးယောက်ထဲ လက်မှာ တက်တူးနဲ့က မင်းဘဲရှိတာပဲ..” “မင်း ဘာတွေ မေးနေတာလဲ.?” “အစုံပဲ.. ဘယ်ကလဲတို့.. စော်ရှိလားတို့.. ငါလည်း ဆေးထိုးပေးလိုက်တယ်၊ အဲ့ကောင်က စော်မထားဘူး ဂျော်ပဲထားတာလို့ ဟား…” “ဟားး..ဟား..ဟီး… ” “အသာလုပ်ပါကွာ တော်နေကြာ သူ့ဆိုင်ရှေ့ဖြတ်ရင် ငါ့လိုက်ဆွဲ နေမှဖြင့် ဟုတ်ပဲ့ဖြစ်နေပါ့မယ်ကွာ..” “ဆွဲတော့လည်း ခံလိုက်ပေါ့ကွ၊ မခါးပါဘူးကွာ၊ အဲ့ဂျော်ကြီးက အိုးကောင်းကောင်းနဲ့ ရှယ်ကြီးပါဟ..” “ဟား..ဒီကောင် ဇာတိတွေပြနေပြီ..ဟိုနေ့ကရော ဆွဲလိုက်သေးလား.ဟားး…” “မဆွဲလိုက်ရဘူး အချိန်မရလို့ ဟီး” ရယ်ပွဲဖွဲ့လို့ သောက်ကာ စားကာနဲ့ အပန်းဖြေနေကြတာ။ ဟုတ်တယ်လေ.. တစ်ပတ်လုံး ပင်ပန်းထားခဲ့သမျှ ဒီတစ်ရက်လေးပဲ ဖြေရတာမို့လား..။
ညဦးပိုင်းမှ နည်းနည်း ပူလာတာနဲ့ စွတ်ကျယ်အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ သီဟ။ နေ့ခင်း အရက်ဝိုင်းမှာတုန်းက မျိုးကြီးရဲ့ စကားများက နားထဲက မထွက်.. (“ဂျော်ကြီးက ခင်ဗျားကို ဂျွတ်နေတဲ့ပုံဗျ..”) မျိုးကြီး အိပ်နေပြီလားမသိဘူး၊ သီဟလည်း တွေးရင်း အခန်းထဲ ဝင်လိုက်တော့ မျိုးကြီးက ဖုန်းသုံးလို့ ကောင်းတုန်း “ဟျောင့် မျိုးကြီး.. မအိုက်ဘူးလားကွာ..လာ ထဦး…” သီဟ လမ်းခေါ်လိုက်တော့ အပေါ်အင်္ကျီဗလာကိုမှ အောက်ခံဘောင်းဘီပေါ်အောင် ပုဆိုးကို စလွယ်သိုင်းလို့ ထ ထွက်လာတဲ့ မျိုးကြီး။ အပြင် လမ်းမရောက်မှ သီဟက “ဟျောင်.. နေ့လည်က မင်းပြောတာ တကယ်လား. ဟို ဂျော်ကြီး ကိစ္စ..” “တကယ်ပြောတာ.. ငါ့ကို မင်းအကြောင်းတွေ မေးနေတာ.. တကယ်ဟ၊ ဘာလဲ လမွှေးရိတ်ခိုင်းမလို့လား” “မဟုတ်ဘူး၊ ဖင်သွားချမလို့..” မျက်စပစ်ပြပြီး သွားရအောင်ဆိုတဲ့ ပုံနဲ့ အဖော်ဆက်လိုက်တယ်။ ခုနေခါက ဖာချရင်တောင် ၈ထောင် ၁သောင်း ပေးနေရမှာ။ ဖရီးလိုးရ နည်းလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ မျိုးကြီးနဲ့ သီဟတို့ နှစ်ယောက် လမ်းထိပ်က ဗျူးတီစလွန်းကို ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ည၁၀နာရီ ဝန်းကျင်မို့ အိပ်နေပုံရတယ်။
မျိုးကြီးလည်း သွပ်ပြားသားတံခါးကို ခပ်ဖွဖွ ပုတ်လို့ “မာမီ.. မာမီ…” “ဟေ..ဘယ်လဲဟဲ့.. ဒီအချိန်ကြီး..” “မျိုးကြီးပါ.. သီဟသူငယ်ချင်းလေ.. သီဟလည်း ပါတယ်..” “ဟယ်..ခဏ..ခဏနော်.. လာပြီ..လာပြီ…” “ဂျောက်..ချောက်..” ဆိုတဲ့ တံခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ မာမီမျိုးဆိုတဲ့ အ၆မကြီး ထွက်လာတယ် “ဒီအချိန်ကြီးကို ဘာလာလုပ်တာလဲ ကောင်လေးတွေရဲ့.. လာ အထဲ.. သီဟလား..လာလေ..မောင်လေး..” သီဟနဲ့ မျိုးကြီး အထဲ ဝင်သွားကြတယ်။ “မာမီက ဒီကောင့် အကြောင်းတွေ မေးနေတယ် ဆိုတာ မယုံလို့တဲ့၊ အဲ့ဒါခေါ်လာပေးတာ” “အယ်..ဟုတ်တယ်.. ဒီဆိုင်ရှေ့မှာ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ တွေ့နေကြမို့လေ.. အာ့နဲ့ စပ်စုကြည့်တာပါ..” “အာ့ဆို မာမီတို့ စကားပြောနှင့်ကြဦး ကျနော် အပြင် ခဏသွားလိုက်ဦးမယ်..” မျိုးကြီးက သီဟနဲ့ မာမီကြီးကို လော်ထားခဲ့ပြီး အပြင်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ “သီဟ..ဇာတ်ကားတွေ ဘာတွေ ကြည့်မလား.. လာ မျိုး အခန်းထဲ..” သီဟလည်း အိပ်ခန်းထဲ လိုက်သွားတယ်။ ဇာခြင်ထောင် ထောင်ထားတဲ့အထဲ ဝင်လိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ် ပက်လက်လှန်လှဲနေလိုက်တယ်။ မီးတွေ အကုန်ပိတ်လိုက်ပြီး ပရိုတယ်ဘယ် ရုပ်ရှင်စက် အသေးစားနဲ့ လိုး ကားတွေ ပြပါတော့တယ်။ လိုးကားက ဘော်ဒီ တောင့်တောင့် ဘဲကြီးက စအို နီတာရဲကြီး ထွက်လာအောင်အထိ လိုးခွဲနေတဲ့ကား.. အားရစရာကြီး။ သီဟလည်း ကြည့်ရင်းနဲ့ လီးစတောင်လာတော့တာ။ မာမီကြီးက သီဟ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ အတွင်းခံကို ဆွဲချွတ်ပြီး တောင်နေတဲ့ လီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုံကိုင်လို့ ထုမှုတ် မှုတ်ပေးနေပါတော့တယ်။
သြကားကြည့်ပြီး ဖီးလ်တက်တာက တစ်မျိုး သူ့လီးကို အစွမ်းကုန်စုပ်ပေးနေလို့ ဖီးလ်တက်နေရတာက တစ်မျိုးနဲ့ သီဟတစ်ယောက် နတ်ပြည်ရောက်လို့နေပါတယ်။ လီးကို စုပ်တာလေ.. ပရိုကျချက်ပဲ.. ကွမ်းသီးခေါင်း ဒစ်ထိပ်လေးကို ကွက်ပြီး ငုံတယ် စုပ်တယ်။ လိင်တံအရည်ပြားကို ဆွဲချလိုက်လို့ ပေါ်လာတဲ့ ဒစ်ထိပ်နဲ့ ကြားက အပိုင်းကို လျှာနဲ့ အသေအချာ ယက်သပ်ပေးတယ်။ အဖျားကစလို့ အဆုံးအထိ ပါးစပ်ထဲ တစ်ဆုံးဝင်အောင် ထည့်လို့ ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ကာ ပါးစပ်နဲ့လိုးပေးတယ်.. သီဟကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖင်ကိုမြှောက်ကာ ပင့်ကာနဲ့ ထိုးကော် လိုးပေးနေမိတော့တယ်။ မြှောက်ထိုးပင့်ကော် ဆိုတာ ဒါမှ အစစ်… “အု..အူး.အွင်း.အင်း…အွတ်..အင့်..” “ပြွတ်..ပြွတ်..ပလွတ်..ပြတ်..ပြွတ်..” သီဟရဲ့ ကော့ထိုးလိုးချက်တွေကို ပါးစပ်ပေါက်နဲ့ အားရအောင် အလိုးခံနေတဲ့ မာမီကြီးရဲ့ ဆံပင်ကို ကိုင်ဆုပ်လို့ စောင့်စောင့်လိုးထည့်နေမိတော့တာ။ “အပေါ်.. အပေါ်ကနေ တက်စောင့်ပေး..” သီဟပြောလိုက်ရင်ပဲ သူအဝတ်အစားတွေ ချွတ်လို့ တုံးလုံးကြီးနဲ့ သီဟအပေါ်တက်ခွကာ ပေါင်းကြားမှ ထောင်ထနေတဲ့ ၇လက်မကျော်အရှည် သီဟလီးကြီးနဲ့ သူ့ဖင်ဝကိုတေ့ကာ ဖိလို့ စသွင်းပါတယ်။
သီဟကလည်း သူ့စွတ်ကျယ်သူ မချွတ်လိုက်ပြီး ခေါင်းအောက်မှာ လက်နှစ်ဖက် ယှက်လျက် ထည့်လိုက်ကာ ဂျိုင်းမြှောက်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ အငြိမ်တစ်လိုင်း ပက်လက်လှန် ဇိမ်ခံနေပါတော့တယ်။ “အိုး…ကျွတ်.ကျွတ်…ကျွတ်…အို့..ဘုရား.” “ဖြောင်း..” စုတ်တစ်သတ်ညဉ်းရင်း ဖင်ထဲကို လီးကြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်းသွင်းနေတဲ့အချိန် ဒစ်ဝင်သွားတာနဲ့ အောက်ကနေ ပင့်ရိုက် လိုးထည့်လိုက်တဲ့ သီဟရဲ့ လိုးချက်အရှိန်ကြောင့် မာမီကြီးခများ ဘုရားတောင် တသွားရရှာပါတယ်။ မတနိုင်ရိုးလား.. ခံချင်လွန်းမက ခံချင်လို့သာ နောက်ပြီး သူခိုက်နေတဲ့ သူငယ်ဖြစ်လို့သာ ခံရတာ လီးကြီးက အယ်ထနေအောင် ကြီးတာမို့ ဖင်ခေါင်းထဲ ပူထူ အီစိမ့်နေမှာတော့ မလွဲ။
“အိုး..အား..ဖြည်းဖြည်း..ဖြည်းဖြည်းလိုးပါသားရယ်…မာမီ့ဖင်ပြဲတာ ကိစ္စမရှိဘူး.. သားလေး လီးကျိုးသွားမှာဆိုးလို့.. အိုး..လိုး..လိုးး.. အား..အိုး…” စွင့်ကားနေတဲ့ အ၆မဖင်ကြီးကို ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်လို့ တစ်ဖောင်းဖောင်းနဲ့ လိုးထည့်နေတာ ခံတဲ့သူတော့မသိ. လိုးတဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့ မြိန်နေရောပဲ “လိုး..လိုး..သား..လိုး…အိုး..စိတ်ကြိုက်လိုး..အိုး..အား…” စိတ်ကြိုက်လိုးလို့ ပြောရင် သီဟအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ စောင့်နိုင်အောင် အပေါ်ကို ခပ်ကြွကြွလေး ထပေးထားတာမို့ သီစတစ်ယောက် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လိုးလို့ ကောင်းနေတော့တာ။ အတန်ကြာလိုးပြီးနောက် အောက်ကနေ ပက်လက်အနေအထားမှ ကုန်းရုန်းထလိုက်ကာ „လေးဖက်ကုန်းပေးဦး.မာမီ” အ၆မကြီးလည်း သီဟစိတ်တိုင်ကျ ဖင်ကြီး အနောက်ပစ်ကာ လေးဖက် ကုန်းပေးထားလိုက်တယ်။
စော်မလိုးရတာတွေ အတိုးချလို့ မာမီကြီး ဖင်ကို စုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင် စောင့်လိုးနေမိတော့တာ။ “အိုး..အား..ထိတယ်..သား..ထိတယ်.အိုး..ကောင်းလိုက်တာ..ကောင်းလိုက်တာ…” “ဖောင်း..ဖြောင်း..ဖြောင်း..ဖြောင်း….” “အင်း..အင်း..အား..အား…” သီဟကိုယ်တိုင်လည်း ဟောဟဲတွေလိုက်လို့ ချွေးတွေပျံကာ အစွမ်းကုန် ဗျင်းနေတော့တာ။ တစ်ချက်ကလေးမှ မနားစတမ်း စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို လိုးနေရင်က လီးတစ်ချောင်းလုံး တစ်ဆက်ဆက်နဲ့ တုန်တက်လာကာ ဒစ်ထိပ်ဖျားတို့ ကျဉ်လာတယ်။ လဥတွဲကြီး နှစ်လုံးထဲမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ လရည်များက အရှိန်အဟုန်နဲ့ တာထွက်လာကြပါတော့တယ်။ “အား..ထွက်ပြီ..ထွက်ပြီ..” “ပလွတ်…” လရည်ထွက်လာတဲ့ အချိန်ကိုက်ပဲ မာမီကြီးက သူ့ဖင်ထဲက လီးကြီးကို ပလွတ်ကနဲမြည်အောင် စွဲချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ပါးစပ်နဲ့ ပြောင်းကာ ငုံခဲထားလိုက်ပါတော့တယ်။ လီးချောင်းကြီးက ဆက်ကနဲဆက်ကနဲ တုန်ခါရင်း လရည်တွေ ပါးစပ်ထဲ အလျှံအပယ် ဝင်သွားပါတော့တယ်။
မာမီကြီးက သီဟရဲ့ လရည်များကို တစ်စက်မကျန် ပါးနှစ်ဖက် ချိုင့်ခွက်ဝင်သည်အထိ စုပ်ယူ မြုချလိုက်တော့တာ။ “ဖုန်း..ဘုန်း..” “သီဟရေ..သီဟ..” အချိန်ကိုက်ထားသလိုပဲ မျိုးကြီး ရောက်လာတာမို့. သီဟလည်း စွတ်ကျယ်တွေ ဘောင်းဘီတွေ ကောက်ဝတ်ပြီး ပြန်ဖို့ ပြင်လိုက်တယ်။ တံခါးဖွင့်လိုက်တော် မျိုးကြီးက စောစောကအတိုင်းပဲ အပေါ်အဝတ်ဗလာ၊ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံး စလွယ်သိုင်းထားတာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကြီးကို ပေါ်လို့.. ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ဖွားနေပြီး “မင်း ကိစ္စပြီး ပြီလား..” “အေးပြီးပြီ..” “မင်းပြီးရင် ခဏစောင့်၊ ငါ ဝင် လုံးလိုက်ဦးမယ်..” မျိုးကြီးက ပြောရင် အထဲ ဝင်သွားကာ တံခါးချက်ထိုးလိုက်တယ်။ သီဟလည်း အရှေ့က ခုံမှာပဲ ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်။ မကြာပါဘူး.. အထဲက ခပ်အုပ်အုပ် ညဉ်းသံ အော်သံတစ်ချိုးရယ် ဆီးခုံနဲ့ ဖင်သားကြီးတွေရိုက်ခက်သံတစ်ဖက်ဖက်တွေ ခပ်သဲ့သဲ့ ကြားလာရပါတယ်။ မျိုးကြီး တစ်ယောက် ပွဲကြမ်းနေတဲ့ပုံ။ နောက်ညများမှာတော့ မျိုးကြီးနဲ့ သီဟတို့အပြင် ကျန်ဘော်ဒါ နှစ်ယောက်ပါ လိုက်လာလို့ တစ်ယောက်တစ်လှည့် လိုးဖြဲကြတော့တာ။ ခံနိုင်စိန် အ၆မကြီးကလည်း ဖရီးကုန်း သီဟတို့ တစ်တွေကလည်း ဖရီးကြုံး… လိုးမဝ ခံမဝ ဖရီးကုန်းည ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းကြပါတော့တယ်။(ပြီးပါပြီ)